मकवानपुर । नेपाली काँग्रेस आवद्ध नेपाल तरुण दल र नेवि संघले हेटौंडामा मूल्यवृद्धि विरुद्ध राँके जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले ठाउँठाउँमा प्रदर्शनकारीमाथि हस्तक्षप गरेको थियो । मसाल खोस्ने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच ठाउँठाउँमा तानातान समेत भएको छ । तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष इश्वर पाठक, नगर सभापति सुनिल गिरी, नेविसंघ […]
हेटौँडा, १४ जेठ । ३ नम्बर प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारलाई घमण्ड नगर्न चेतावनी दिएर संसदमै हल्लाखल्ला मच्चाइदिएका छन् । प्रदेशसभामा आइतबार विशेष समयमा बोल्दै नेता बानियाँले प्रदेश सरकारको एक सय दिनको समिक्षा गर्दै जनताको हितमा काम नगर्ने र घमण्डमात्र प्रर्दशन गरिरहेमा जनताले आगामी निर्वाचनबाट नेकपालाई पूर्ण विराम लगाईदिने बताउँदै […]
–बलराम पुडासैनी हेटौँडा, २३ चैत । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा आजभोलि सकसपुर्ण बन्न थालेको छ । सामान्य काम लिएर आएका सर्वसाधारणहरु दिनैभरी ठेलमठेल गरेर बसीरहेका हुन्छन् । साथै केहि कामको प्रक्रियाको बारेमा अत्तोपत्तो नभएर कार्यालयमा फनफनी घुमीरहेका देखिन्छन् । त्यसोत हालसालै हेउनपामा पुग्ने जो सुकै सेवाग्राही पनि दिक्क मान्न थालेका छन् । सर्वसाधारणलाई कामको […]
बलराम पुडासैनी मकवानपुर, ९ चैत । जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरको कार्यालय अगाडि सडकमा सवारी पार्किङ अस्तव्यस्त रुपमा भइरहेको छ । सडकनै अबरुद्ध हुने गरी सवारी पार्किङ हुँदा समेत त्यसको व्यवस्थापनमा भने सिडिओको ध्यान गएको छैन् । सिडिओ कार्यालय परिसरमै पर्याप्त ठाउँ भएपनि नियमनकारी निकायका प्रमुखले नै गेटमा ताला लगाएर अत्यन्त चाँप रहने सडकमा सवारी पार्किङ […]
मकवानपुर, ८ चैत । कोरियामा रोजगारीका लागि जान बैँकमा पैसा जम्मा गर्ने विद्यार्थीहरुको लाईन मिलाउन मकवानपुरको हेटौँडामा प्रहरीलाई हम्मे–हम्मे भएको छ । बिहीबारबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीसएस) परीक्षाको आवेदन खुलेपछि हेटौँडाको कान्तिराजपथमा भएको ग्लोबल आईएमई बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेको भिड अहिले थामिनसक्ने अवस्थामा छ । भिडलाई शान्त बनाउनका लागि प्रहरीले लाठी चार्ज नै गर्नुपर्ने अवस्था […]
मकवानपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिशतको आधारमा पार्टी एकता नहुने बताएका छन् । मकवानपुरका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै उनले बराबारीको आधारमा मात्र पार्टी एकता हुने बताए । दुबै पार्टीले आआफ्नो पक्षमा मात्र तर्क गरे भने त धेरै कुरा आउने स्पष्ट पार्दै उनले माओवादी परिवर्तनको बाहक भएकोले त्यसै अनुसार पार्टी एकता हुने […]
हेटौँडा, ९ फागुन । स्टेट भिजन प्रालिद्वारा संचालित तु खबर डटकमले फागुन ८ गते प्रथम वार्षिक उत्सव मनाएको थियो । जसमा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कटेल विशिष्ट अतिथि र संसदीय दलका मूख्य प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व गृहराज्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ विशेष अतिथि रहेका थिए […]
मकवानपुर १९ माघ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको प्रमुख सचिवको रुपमा आज रेश्मिराज पाण्डेले पदबहाली गरेका छन् । पदबहालीको क्रममा उनले आफु प्रमुख सचिवको रुपमा पदबहाली गर्न पाँउदा निकैनै खुसी लागेको बताएका छन् । उनले मकवानपुरका सरकारी निकायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद्को कार्यालयको तक्काल व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरेको प्रति आभार व्यक्त गरे । आफुलाई नेपाल सरकारको […]
-चन्द्र घलान/बलराम पुडासैनी मकवानपुर, १४ माघ । मकवानपरबाट वि.सं. २०७० सालमा चुनाव जितेका पूर्व सांसद सुवाश चन्द्र ठकुरीले हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्गमा घोटाला गरेको समाचार मिडियामा आएपछि अहिले यो विषयले मकवानपुरमामात्र नभई देशभरि नै सनसनी मच्चाएको छ । हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्थापित कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडमा सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वसांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले पनि बदमासी […]
मकवानपुर ७ माघ । नेपाली काँग्रस मकवानपुरका प्रदेशसभा सदस्य एवं पुर्व गृहराज्य मन्त्री ईन्द्र बहादुर बानिँयाले प्रदेशको राजधानी हेटौैंडा बनाउँन उपयुक्त रहेको र नेपाल सरकारले अस्थायी राजधानी घोषणा गरेर निकैनै राम्रो काम गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अधिदेखि नै मकवानपुरको हेटौंडालाई प्रदेश राजधानी बँनाउनको लागि आवाज उठाउँदै आएका बानिँयाले तु खबर संग […]
२५ मिटर हेटौँडा बजारभित्रबाट जाँदैन–डोरमणि पौडेल
३ नम्बर प्रदेशको मूख्यमन्त्री मै हुन्छु : ईन्द्रबहादुर बानियाँ (भिडियो सहित)
मकवानपुर, २३ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका मकवानपुर सभापति तथा आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मा मकवानपुर प्रदेश नं. २ को २ बाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार ईन्द्रबहादुर बानियाँले आफू निर्वाचित भएमा ३ नम्बर प्रदेशको मूख्यमन्त्री वा विपक्षी दलको नेता बन्ने दावी गरेका छन् । तु खबरसँग आज बिहीबार भिडियो अन्तरवार्तामा कुराकानी गर्दै बानियाँले राष्ट्रिय आवश्यकता […]
एमालेभित्र के समस्या छ र ? उत्साहमात्र छ : कृष्णप्रसाद दाहाल (भिडियो सहित)
मकवानपुर, २२ कात्तिक । बाम गठबन्धनका तर्फबाट मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद दाहालले बाम गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । तु खबरसँग कुराकानी गर्दै उम्मेदवार दाहालले यो गठबन्धनले कार्यकर्तामा आसा, भरोसा र उत्साह मात्र थपेको बताएका छन् । युवाहरुलाई समान र महत्वपूर्ण अवसर दिनु पर्छ भन्नेमा आफ्रू प्रतिवद्ध रहेकोले […]
चुनाव जित्नु ठूलो कुरा होईन जनताले पत्याउनु ठूलो कुरो हो –निम टोल्मा (भिडियो सहित)
हेटौंडा , २७ बैशाख । जनजागरण पार्टी नेपालका तर्फबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेदवार निम टोल्मा आचार्यले चुनाव जित्नु ठूलो कुरा नभएको तर आफुलाई जनताले पत्याउनु ठूलो कुरा भएको बताएकी छिन् । जनजागरण पार्टी नेपालले आज हेटौंडामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफुलाई जनताले विश्वास गरेर सहयोग गरेमा जनताको सेवा गर्ने बताईन् । उनले हेटौंडा नगरलाई स्मार्ट […]
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मतगणना सुरु, वडा नम्बर १ को मतगणना हुँदै
हेटौंडा १, जेठ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा हिजो भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । हिजो राति बसेको सर्वदलीय बैठकले बिहान ७ बजेबाट मतगणना गर्ने भने पनि ढिलागरी भर्खरै मतगणना सुरु भएको हो । मतगणना वडा नम्बर १ बाट सुरु गरिएको छ ।
मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा तनाब (भिडियो सहित)
हेटौंडा, २८ बैशाख । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ घर भएका भरत अर्यालका बुहारी सुनिता अर्यालको सुत्केरी अप्रेसन गर्दा मृत्यु भएपछि अहिले मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा तनाब भइरहेको छ । थुप्रै संख्यामा उपस्थित आफन्तहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन् । अस्पतालमा आफन्तहरुले तोडफोड तथा ढुंगासमेत हानिरहेका छन् । घटना स्थलमा रहेका तु खबरदाताका अनुसार, आफन्तहरुले क्षतिपूर्ति र अस्पताल प्रशासनले […]
<< Older 1 2